I-B&B esuka kumakhulu uMaria
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguIuri
Siyakwamkela kwimeko yokuqhelana kunye nokulula kwindlu yethu yasemaphandleni esanda kulungiswa eco-sustainable enefenitshala yesiqhelo kunye nokusingqongileyo ngaphandle kokutyeshela intuthuzelo kunye netekhnoloji.
Sinikezela ngesidlo sakusasa esityebileyo nesinyanisekileyo esisekelwe kwiikeyiki ezenziwe ekhaya kunye neejam; ngesicelo kwakhona isidlo sakusasa esinencasa kunye neemveliso eziqhelekileyo zasekhaya.
Sikwanayo nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elifumanekayo kwiindwendwe, ezixatyiswa kakhulu ngokuhlala ixesha elide.
Sinikele ingqalelo ekhethekileyo kwimiba yokusingqongileyo kunye nokufakelwa kwenkqubo ye-photovoltaic yokuvelisa umbane, ukufudumeza kwe-geothermal kunye nokupholisa ngempompo yokushisa, ibhoyili yokhuni eyongezelelweyo, inkqubo ye-thermal yelanga yokuvelisa amanzi ashushu asekhaya.
Apha uxolo noxolo kulawula: sizama ukuphila kwakhona ngesingqi somntu kunye namaxesha onyaka.
Unokuhamba ngoxolo kwiindonga zemilambo esingqongileyo okanye utyelele iindawo ezininzi ezinomdla onokufikelelwa kuzo ngemizuzu embalwa ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Iuri
Nasiphi na isicelo sihlala sikhona: sihlala apha kunye nawe.